(Last Nohavaozina: 16/07/2021)
Tsy misy tsara kokoa noho ny fihetseham-po ireo resin-tory eo amin'ny fiaran-dalamby moramora nampihetsi-po sy mamoha ny ampitso maraina teo ny tanjonao, minitra fotsiny avy amin'ny tehezan-tendrombohitra. In Eoropa, isika dia manararaotra amin'ny safidy rehefa mitady ny hotely Ski tsara hitsidika azy amin'ny lamasinina. Tsy izy fotsiny levitra nandehanany izay safidy tsara ho an'ny mpanao ski, na izany aza. Misy ny nahay ny Resorts dia afaka tonga avy amin'ny alalan'ny lalamby nony andro mandeha amin'ny dia nataon'i, isan-trano, dia mikasika ny haingana toy ny manidina.
Ireto ny safidintsika sasany amin'ireo trano fivarotana Ski tsara indrindra hitsidika ny fiaran-dalamby:
telo Resorts, Grindelwald, Wengen, ary Murren, dia rakotry ny faritra ny Jungfrau atraka mandalo. Ririnina io nofy niainana!
By fiaran-dalamby: Raha azonao atao ny mandeha amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby avy Ski London St. Pancras miaraka amin'ny Eurostar mankany Wengen dia misy fiovana maromaro. Raha mandeha ianao amin'ny fianakavianao, dia mampiseho mahazo ny fiaramanidina ho Bern na Zurich. avy eo, maka fifandraisana mivantana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby ho any Interlaken Ost Bern, ary manomboka ny Lauterbrunnen. The last bit of the journey is reachable ihany rail avy Lauterbrunnen sy maka fotsiny 15 minitra.
Raha toa ianao ka nahatsapa tia manao ski ambony, avy eo ny toeram-pisakafoanana Ski tsara indrindra hitsidihana lamasinina no ho Sauze d'Oulx faritra. Rehefa latsaka ny oram-panala ny vovony saha teo amin'ny hazo tena tonga any ny. Ny rivo-piainana ao an-tanàna dia mahafinaritra sy fandraisana sy ny hatsarany ny taloha arabe cobbled tena manampy ny tsara tarehy mikasika ny traikefa nahafinaritra.
mialà London St Pancras amin'ny 9:24 am Eurostar mankany Paris Nord, toerana fiovana amin'ny taxi, ary raiso ny 2:41 PM TGV avy any Paris-Lyon ho Oulx, tonga amin'ny 7:23 PM. Avy eo izany 15 minutes by fiara fitateram-bahoaka na fiarakaretsaka.
Efa efa feno ny kitapo? tsara! satria izany no sarotra indrindra ny dia nandamina avy. Famandrihana ny fiaran-dalamby dia haka minitra fotsiny, tsy misy mpitantana saram! Tena fahafinaretana! Visit Save A Train ankehitriny ary manorata ny fialantsasatra mandritra ny androm-piainana.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fski-resorts-visit-train%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#Ski europeantravel europetravel longtrainjourneys tia manao ski ambony oram-panala fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel